> Resource> iPhone> Olee wepụ Notes si iPhone ndabere na Mac
Enwere m ike wepụ ndetu si Mac iPhone ndabere?
M nwere arịrịọ: bụ n'ebe a na omume nke bụ ike wepụ ndetu si iPhone ndabere na m Mac nke mere na m nwere ike mbupụ ha ka ha m desktọọpụ? M maara m iPhone ndetu e synced na iTunes ma m na-amaghị otú na-azọpụta ha na m Mac. Daalụ nke ukwuu.
N'adịghị ka ndị ọzọ ndabere faịlụ, iTunes ndabere faịlụ bụ n'ezie-adịghị ahụ anya na keerughi na gị Mac. Nanị ụzọ na ị nwere ike ịlele ndetu bụ ele ha na gị na iPhone. Ọ bụ ezi echiche iji zoputa inweta iPhone ekwu ndabere na gị Mac maka na-atụghị anya mkpa dị ka iPhone mebiri na mberede.
Ọ dabara nke ọma na e nwere omume na-akpọ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows) na-enyere gị wepụ ndetu si iPhone ndabere na gị Mac / Windows kọmputa. Ọ na-enyocha gị iTunes nkwado ndabere na mpaghara extracts data site na ya ọsọ ọsọ na n'enweghị.
Download ikpe mbipute nke Wondershare Dr.Fone na-amalite wepụ ndetu si iPhone ndabere ugbu a.
Nzọụkwụ wepụ ndetu si iPhone ndabere na Mac / Windows kọmputa
Nzọụkwụ 1. Họrọ "naputa site na iTunes ndabere File" mode
Ebe a, ka na-agbalị na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) na nzọụkwụ. Mgbe wụnye na launching usoro ihe omume gị na Mac, i kwesịrị a mgbake mode. Wepụ ndetu si Mac iPhone ndabere, biko họrọ "naputa site na iTunes ndabere File" mode.
Ọ bụrụ na ị chọrọ wepụ ndetu ozugbo gị iPhone, ị nwekwara ike họrọ "naputa site na iOS Ngwaọrụ" mode.
Ebe a Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) ga-chọpụta na depụta niile iTunes ndabere faịlụ na gị Mac. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ otu nwe gị iPhone na pịa "Malite iṅomi".
Nzọụkwụ 2. Preview na wepụ ndetu si Mac iPhone ndabere
Ugbu a niile ọdịnaya gị Mac iPhone ndabere faịlụ a ga-depụtara na edemede dị ka "Notes", "Ndi ana-akpo", "Ozi", wdg Ị nwere ike ịlele "Notes" ka ịhụchalụ ha họrọ ndetu i wee pịa "Naghachi" mbupụ ha na gị na Mac.
Gịnị bụ More:
1. ma e wezụga adịrị ndetu si iPhone ndabere na Mac, ị ga-enwe ike wepụ ndị ọzọ faịlụ dị ka photos, videos, kalenda, ozi, kọntaktị, ibe edokọbara, wdg si iTunes ndabere.
2. The kasị ukwuu atụmatụ nke Wondershare Dr.Fone maka iOS bụ na ị pụrụ naghachi gị furu efu iPhone data si ma iPhone (maka iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS, niile iPads na iPod aka 5/4) na iTunes ndabere na gị Mac (dị maka ihe nile iOS ngwaọrụ). Ị pụrụ ịmụta ihe ebe a: otú naghachi iPhone ndetu na Mac.
Ọ bụrụ na ị nwere a Windows kọmputa, Windows version nke Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) bụ gị mma ngwọta wepụ data site iTunes ndabere ma ọ bụ naghachi iPhone data on Windows kọmputa kwa. Mụta ihe ebe a: Windows iPhone ndabere extractor.
Otú nyefee Data si iPhone (iOS) ka Blackberry